I-Eurovision ka-2011 iya kuba sele iphakathi kwama-56 kumncintiswano we-Eurovision Song Contest. Kuya kubanjelwa eDüsseldorf (eJamani) ukususela ngomhla we-10 ukuya kwe-14 kuMeyi. Ngokwesiko, ukhuphiswano lwenziwa yilizwe eliphumeleleyo. Kunyaka ophelileyo, iJamani yanqoba umculi uLena, owenza ingoma "iSatellite". Kakade, ingqalelo yezigidi zababukeli belokhu bekhangele kule phiswano. I-Eurovision ka-2011, inyaniso enomdla kunye nabathathi-nxaxheba bekuyi-ingxoxo kwingxoxo kweso siganeko. Yintoni ekuya kuthi ukuncintisana komculo kusinike lona nyaka?
Ngoko, amaqiniso anomdla kunye nolwazi oluncedo: ezi zifundo ziza kubanjwa ngoMeyi 10 no-12, kwaye okokugqibela kuya kubanjwa ngoMeyi 14. Ithempyutri yoluntu yaseRashiya iza kusasaza i-Russia. Ingxelo iya kuba ngu-Yuri Aksyuta no-Yana Churikova.
Umxholo woyilo wawunemibala enemibala, kwaye njengokuba imbonakalo intliziyo, eyenziwe yimitha, yanyulwa. Isiqubulo sokhuphiswano kukuba: "Yiva intliziyo".
UHanver, iHamburg, iBerlin kunye neDüsseldorf babefuna ukukhuphisana. Inkundla yaseDusseldorf ihlala kuma-50,000 ababukeli, kwaye oku kuye kwaba yinto ebalulekileyo ekukhetheni indawo yokhuphiswano. Ngaphambili, iJamani yayivele iqhube i-Eurovision ngo-1957 no-1983, kodwa i-Jalimane ebumbene yayamkela ukhuphiswano okokuqala ngqa. "I-Eurovision 2011" iya kuba ngumcimbi omkhulu weTV wonyaka. Ngexesha lokubonisa, kucetywayo ukusebenzisa ama-camera ekwi-25.
Lo nyaka, e-Italy, e-Austria, eHungary naseSan Marino ziya kubuya kukhuphiswano. Ekupheleni konyaka, abathathi-nxaxheba abamele amazwe angama-25 ("aMahlanu aMahlanu") kunye nabaphumeleleyo aba-10 be-semifinal nganye baya kukhuphisana.
Umkhosi wokuvula umncintiswano uya kubanjwa ngoMeyi 7 eDusseldorf. Ukuvulwa kuya kwenzeka kwi-planetarium Tonhalle, efumaneka kwiibhanki zeRhin. Umkhosi wokuvula uya kuba nguMeya wedolophu iDerk Elbers.
Xa kuthelekiswa nomnyaka odlulileyo, akukho lizwe elalithatha ukuthatha inxaxheba. Isicelo esivela eMontenegro asiqinisekanga ngezizathu zemali. Ngaphambili, iLuxembourg, iRiphabhlikhi yaseCzech, iMonaco, iAndorra, iMorocco kunye neLebhanon yawela kwi-Eurovision 2011.
Amazwe angama-43 ayilona inombolo yerejista yabathathi-nxaxheba. Kwiminyaka emithathu edlulileyo, inani elifanayo lamazwe lathumela abameli balo eBelgrade. Ilizwe lokuqala ukwenza isigqibo malunga nommeli walo yiJamani. Kuya kuphinda kuhanjiswe nguLena Meyer-Landrut, owawunqoba ngonyaka odlulileyo e-Oslo.
IRashiya iya kumelwa kwintlintle nguAlexei Vorobyov ngengoma ethi "Yiba Wena". Kulo nyaka, i-ORT isebenzisa ilungelo layo lokuzimela ngokuzimela ingoma yomncintiswano ngaphandle kokuqhuba ujikelezo olufanelekileyo lwesizwe. Ingoma ibhaliwe ngu-RedOne - umbhali we-Official Fune ye-FIFA ye-2006, ukusebenzisana no-Lady Gaga, u-Shakira, uJennifer Lopez, u-Enrique Iglesias kunye nezinye iinkwenkwezi.
U-Alexey wazalelwa ngo-1988 kwisixeko saseTula. Waphumelela kwiikholeji zomculo, isikolo somculo nesikolo. Gnessins. Ngokuphindaphindiweyo waba ngumntu ocebileyo kunye nediploma eyinqoqo yemincintiswano yamazwe ngamazwe neyeRashiya, yadlala ngaphezu kwe-14 iindidi kwiifilimu.
NgoFebruwari 26, ngoMgqibelo, emoyeni weSizwe soPhuhliso lweSizwe sokuqala ilizwe elikhethiweyo elimele lona. Baye waba nguMicha Newton, owakwazi ukunqoba bonke abaphulaphuli kunye nejury yobuchwepheshe. Ekukhethweni wonk 'ubani wakwazi ukuthatha inxaxheba - ukuvota kwi-Intanethi yaqala ukuwa, kodwa kude kube nomzuzu wokugqibela akekho umntu ongathembela igama lakhe ngokuzithembayo, umgudu wagcinwa kwaze kwaba sekupheleni. Ophumeleleyo akakwazanga ukukhusela iinyembezi ngexesha lokusasazwa ngokusasaza emva kokubhengezwa kweziphumo. Isiteketiso uMick Newton saqulunqwa ngumvelisi wakhe wokuqala u-Yuri Thales. INewton ngesiNgesi - "ithoni entsha" kunye noMika - kwi-rollist Stones uMichel Jagera.
Ummeli oseburhulumenteni waseBelarus kumncintiswano uya kuba ngumculi wokuqala uNastya Vinnikova ngengoma yokuthanda izwe "Ozelwe eBelarus"! Ababhali babenguViktor Rudenko noYevgeny Oleinik, owayengumvelisi we-Junior Eurovision Song Contest 2007, uAlexei Zhigalkovich. Kukho ngonyameko ukuba isisombululo sokukhetha uNastya kwakuyivo "kababa" - uAlyaksandr Lukashenka, owamthanda kakhulu umdlali omncinci kakhulu.
Ababhuki abakhulu bebhengezo babenze izibikezelo zabo zokuqala zesiphumo sokhuphiswano. Umfrentshi u-Amory Vasili waba ngumthandayo, kwaye ummeli waseRussia wangena ezilishumi eziphezulu. Amathuba eFransi ayewaxabisa kakhulu kwiiofisi zaseburhulumenteni zaseburhulumenteni zaseLibhan Ladbrokes noWilliam Hill. U-Amori Vasili wadala ii-albhamu ezimbini ezithengiswa eFransi ngaphezu kwama-250,000 ikopi.
Kuba iBasil ilandela iNorway neGreat Britain, kunye ne-Estonia nakwiJamani. I-Russia yabela indawo yesithupha kunye neSweden. I-10 ephezulu ivalwe ngabameli baseAzerbaijan, eBosnia naseHerzegovina naseHungary.
Umqhubi kuphela we "Eurovision" waseRashiya - uDima Bilan uqinisekile ukuba u-Alexei Vorobyov uya kungena ezintlanu eziphezulu okanye abaphumelele abathathu kulo nyaka.
U-Yana Rudkovskaya ukholelwa ukuba u-Eric Sade (eSweden), u-Getter (Estonia), iqela elithi "iBlue" (iBritish Great) kunye noCathy Woolf (Hungary) banamathuba aphezulu okusinqoba. Ngokukhethwa kweRashiya, yena, ngokuvuma kwakhe, uyincinci. Ngokombono wakhe, u-Alexey wamukelwa phambili kakhulu kwi-First Channel, nangona ethanda ukukhetha ngaphezulu kunabo abenza iRussia kwiminyaka emibili edlulileyo.
Ibali lobomi bukaAni Lorak
Umtsalane odumile weTV uLyudmila Hariv
Unyango lwe-spine, i-osteochondrosis, i-scoliosis
IHoroscope yeTaurus-abafazi ngoMeyi 2017
Iidlophu zasendulo zesiFrentshi
Kutheni sifuna iphupha malunga neerati ezifile?
Indlela yokuhlobisa ibhaluni ngeentyantyambo
Indlela yokujamelana nemigraines, i-acne kunye nentlungu yesisu: unyango loxinzelelo
Iipropati ezibalulekileyo zeentlanzi ezibomvu
UHam eneenyama egayiweyo
Izizathu zokungala ukutya iintsana
Abacukungisi (abalukiweyo) kwi-oven